လက်ကား Wrought သံကွေးစက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သူ ANBANG
မော်ဒယ်နံပါတ် HBAB-PCW-1 ဖြစ်သည် ရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှု
Materia ကိုရွှေ့ပါ သံပြား၊ Square Bar၊ Round Bar၊ Square Pipe Scroll Type C, S, P, Abnormity
ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း PC အစီအစဉ်ထိန်းချုပ်ရေး မော်တာပါဝါ ၁.၅ KW
စက်အလေးချိန် 350 KG စက်အတိုင်းအတာ ၈၀၀x၅၅၀x၁၁၀၀ MM
အခမဲ့ Scroll သေသည်6ဆိပ်ကမ်း XINGANG, TIANJIN
စက်ကိုသတ္တုလက်မှုအလှဆင်နယ်ပယ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြားချပ်ချပ်၊ လေးထောင့် (သို့) ပတ် ၀ န်းကျင်သတ္တုပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် (S/C/P/O) ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကွေးနိုင်သည်။ စက်သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏ထုတ်ကုန်ပုံစံကိုစီမံဆောင်ရွက်ရန်သင့်တော်သည်။
ပစ္စည်း HBAB-PCW-1 ဖြစ်သည် HBAB-PCW-2
အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ▄ ≤10mm× 50mm ≤50mm× 10mm
● ≤Φ16မီလီမီတာ ≤Φ20မီလီမီတာ
■ ≤16mm× 16mm ≤20မီလီမီတာ
Moter စွမ်းဆောင်ရည် 3KW 380V ဖြစ်သည် 4KW 380V ဖြစ်သည်
လုပ်ဆောင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် 1. SIMATIC Controller-PLC ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်များတွင် ipmlemented လုပ်ထားသည်။ သူတို့ကအဆင့်မြင့်တယ်၊ မြန်တယ်။ ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်ကွဲပြားသော ststems များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစီမံရန်လွယ်ကူသည်။ ၂၀၀ မီလီမီတာအခြေစိုက်စခန်းသည်မှိုများကိုအားဖြည့်ပေးပြီး၎င်းတို့၏သက်တမ်းကိုရှည်စေသည်။
၃။ eccentric shaft ကို scalene tringle ဖြင့်သံမဏိကိုကွေးသည့်အခါပုံစံခွက်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်။
၄ င်းသေဆုံးမှုများသည်သာမန်ဂဟေဆက်များထက်တစ်ဆူတည်း၌နှစ်ခု (အရင်းနှင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူ) ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ရှားပါးစွာကွဲနိုင်သည်။
၅။ ရိုးတံကိုအတားအဆီးအတွင်းထည့်ထားသည်၊ makin id သည်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး၊ og ဆီမရှိလျှင် mackine ရပ်တန့်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
8. ဘာသာစကားမျိုးစုံ (တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ Russicn) ရနိုင်သည်။
၉။ PCB အပိုပစ္စည်းများအားလုံးသည်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်တူညီသည်၊ ၎င်းသည်ဒုက္ခရောက်သောအခါပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းရန်အဆင်ပြေသည်။
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) L × W × H = 800 × 560 × 1100/860 × 620 × 1200
NW (ကီလိုဂရမ်)/GW (ကီလိုဂရမ်) ၂၃၀/၂၈၀ ၂၃၀/၂၈၀
မော်တော်စွမ်းဆောင်ရည် 3kw 220v/380v 50hz
လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည် H13 အပူပေးလိပ်သေတ္တာ st l အတွက် 1.Mold ပစ္စည်း 40 br အတွက်၊ မြင့်မားသောမာကျောမှု၊ ကောင်းသောမာကျောမှု ၂ ။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်အပေါက်သည်ဖုန်မှုန့်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင်လွယ်ကူစေသည်၊ သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူပြီးဂီယာဘီးအပြင်ဘက်၊
၄ င်းနောက်ဘက်မှ rollers များလျော့ရဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန် Built-in stopper ။
၅။ စက်၏ holdup ပန်းကန်ပြားအဖုံးပေါ်တွင် rolling size localization device ရှိတယ်။ thebest rolling effect ကိုရရှိရန်ထုတ်ကုန်အလိုက် feed size ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
6. ဤစက်။ roll eccentricity ကို shaft eccentricity သို့ပြောင်းသည်။ roller ၏အလုပ်လုပ်ပုံသည်အခြားသူများထက်သုံးဆပိုများသည်။
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) L × W × H = 1055 × 570 × 1180
NW (ကီလိုဂရမ်)/GW (ကီလိုဂရမ်) ၂၇၀/၃၃၀
အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ▄ ≤10mm× 50mm
Moter စွမ်းဆောင်ရည် 7.5KW 380V 50HZ အလုပ်ဖိအား: 200KN
လည်ပတ်မှုဒဏ်: ၂၅၀ မီလီမီတာ
လုပ်ဆောင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ၁။ Hydeaulic bending machine သည်သံပန်းစက်ရုံများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကကျသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်အတူ HBAB-H16A သည် wrought iron အစိတ်အပိုင်းများကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်စက်ကိုစီမံကွပ်ကဲရန်လွယ်ကူသည်။
၄။ ပိုကျယ်သောအလုပ်ဧရိယာနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းသည် wrought သံဒီဇိုင်းများ၏ ၉၀% ကိုဤစက်ဖြင့်စီမံနိုင်သည်။
6. Prossure gauge ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) L × W × H = 1250 × 620 × 1100
NW (ကီလိုဂရမ်)/GW (ကီလိုဂရမ်) ၅၅၀/၆၀၀
Hebei Anbang Ornamental Iron Co. , LTD သည် hebei ပြည်နယ်၊ shijiazhuang မြို့၌တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် al cast နှင့်သံအတုတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံနှင့်ဒေသ ၃၀ ကျော်မှရာပေါင်းများစွာသောရောင်းသူရာပေါင်းများစွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ ပန်းများနှင့်အရွက်များ၊ လှံများ၊ ကော်လာများ၊ ဆက်သွယ်မှု၊ တံခါးအလှဆင်ခြင်း၊ ဂဟေပြားများ၊ စာလိပ်များ၊ ပန်းစည်းများ၊ လက်တန်း၊ ခြံစည်းရိုး၊ wrought သံစက်များ၊ ဥပမာ၊ scrolling machine၊ bending machine နှင့် fishtail machine ။
သံဂိတ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ, Metal Sheet များ, Handrail Tube များ, ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုး, အလှဆင်ခြံစည်းရိုး, တံဆိပ်တုံး Post,